Australia inosunga madhora 1.4 mabhiriyoni ekurasikirwa nekuda kwekushanya kweChina
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Australia inosunga madhora 1.4 mabhiriyoni ekurasikirwa nekuda kwekushanya kweChina
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kushaikwa kwevashanyi vanobhadharwa kubva kuChina kuchabhadhara kushanya kweAustralia $ 1.4 bhiriyoni panguva yezororo reChinese Idzva
Chinese Nyowani Gore inowira muna Kukadzi 12, uye Kukadzi zvakare mwedzi uyo pachinyakare une huwandu hwakanyanya hwevashanyi veChinese vanoenda kuAustralia.
Gore rino mabhizinesi ekuAustralia ekutengesa nekutambira anotarisirwa kurasikirwa nemabhiriyoni 1.4 emadhora emadhora ekushanya nekuda kwekushayikwa kwevashanyi vakapfuma mari yekuChina panguva yekupemberera kweGore Idzva reChina.
Mu2019, vanopfuura 200,000, kana 14%, yevashanyi venguva pfupi kubva kuChina gore rakasvika munaKukadzi Australian Bureau of Statistics.
Iyo nhamba yakadzikiswa zvakanyanya kusvika ku21,000 mu2020 sezvo miganhu yakavharwa nekuda kwecornona virus.
Nendege dzevashanyi dzinobva kuChina dzakadzika pasi, ndoda nyika dzese, kudonha kwemari kuchave kwakakura, anodaro National Retailers Association CEO Dominique Lamb.
Avhareji mushanyi wechiChinese akashandisa zvishoma kudarika $ 8,500, inokwana $ 1.755 bhiriyoni, muna Kukadzi 2019.
Kusavapo kwavo kwaizonzwika kumatunhu ese, kubva pakutengesa kusvika kune vanoshanya uye kunyange makasino.